Guurka oo ka Hortaga Khatarta Wadno-xannuunka | Maankaab.com
Guurka oo ka Hortaga Khatarta Wadno-xannuunka
Guurku waxa uu difaac u yahay khatarta xannuunka wadno-xannuunka sida ay sheegtay cilmi-baadhis cusub.
Lammaanaha is guursada, ayaa ka badbaada xannuunka wadno-xannuunka 14%, marka loo eego dadka kalinimada ku nool (Single) sida daraasadan cusub soo bandhigtay. Waxa ay daraasadu intaa raacisay in lammaanaha is qabaa xaaladooda nololeed iyo wada noolaanshahoodu caafimaadka kor u qaado.
Sayga iyo oorida waxay inta badan iska caawiyaan daryeelka caafimaad, tusaale ahaan waxa ay is xasuusiyaan in ay dawooyinka qataan haddii mid ka mid ah loo qoro amma waxa mid ba midka kale la socdaa xaaladiisa guud.
Dr. Paul Carter oo ka tirsan Jaamacadda Aston University ee dalka Ingiriiska, daraasadana hormood ka ah, ayaa sheegay; “Guurka iyo in aad lammaane nolosha kula wadaago lahaato waxa aad ka helaysa taageero niyad iyo jid ahaaneed.”
Cilmi-badhayaashu waxa ay fallanqeeyeen bukaan cusbitaallada England la dhigay intii u dhaxaysay 2000 ilaa 2013-kii. Dadka baadhitaanka lagu sameeyey waxa ay ahaayeen dad hore uu ugu dhacay xannuunka wadno-xannuunka (Heart Attack) amma khatar ugu jira in xannuunku haleelo.
Khubaradu waxa ay u kala sareen laba qaybood oo kala ah kuwo xaaslay ah iyo kuwo kalinnimo nool, waxaana soo baxday in kuwa lammaanaha leh ay ka badbadaan khatarta xannuunkan 14%, marka loo eego dhigooda aan guursan.
Natiijada cilmi-baadhista oo lagu soo bandhigay Shirka Ururka Dhakhaatiirta Wadnaha (European Society of Cardiology) oo ka dhacay magaalada Barcelona ee dalka Spain, waxa uu iftiimiyey ahmiyada guurku u leeyahay caafimaadka labka iyo dheddiga.
“Nooca xidhiidhka lammaanaha waa muhiim, waxa isa soo taraya caddaymo badan oo sheegaya in isku buuqa iyo nolosha kalinnimada ah iyo furiinku ay xidhiidh la leeyahay wadno-xannuunku inuu qofka haleelo. Sidoo kale, waxa aan ogaanay in bukaannada lammaanahooda ay is fureen inuu dhiig-kar ku dhuftay, kadibna ay wadno-xannuun sidaa ku qadeen,” ayuu yidhi Dr. Carter.